Madaxweynaha K/Galbeed oo war kasoo saaray xarigii Mukhtar Rooboow iyo rabshadihii Baydhabo. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Koonfur Galbeed / Madaxweynaha K/Galbeed oo war kasoo saaray xarigii Mukhtar Rooboow iyo rabshadihii Baydhabo.
Madaxweynaha K/Galbeed oo war kasoo saaray xarigii Mukhtar Rooboow iyo rabshadihii Baydhabo.
January 21, 2019 - By: Abdirisak Faamoos
Sida uu maalin kahor magaalada Baydhaba ka sheegay Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Somalia mudane Cabdi Casiis Maxamed Xasan Lafta gareen waxa uu ka shaqeyn doono xalinta waxyaabihii ka dhacay magaalada Baydhabo intii uu musharaxa ahaa.
Madaxwayne Lafta Gareen ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanka uu kala hadlay labo arin oo kala ah sidii xal looga gaari lahaa dhibaatooyinkii ka dhacay magaalada Baydhabo iyo xariga Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur.
Wuxuu sheegay in isaga maadaama hadda uu yahay madaxweynaha la doortay shaqaaqadii dhacday kadib inuu xalin doono tabashooyinka ay qabaan odayaasha dhaqanka ee Koonfur Galbeed.
“Doorasho kasta oo dunida ka dhacda ayaa dhibaato ay ka dhacdaa, tan iyo ugu yar waa la isku caayaa ama la isku dilaa, waxii halkaan ka dhacay maadaama hadda aniga madaxweyne aan ka noqday Koonfur Galbeed anigaa u taagan inaan xaliyo”ayuu yiri Lafta Gareen.
Dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya iyo guddoonka baarlamaanka ayuu sheegay inuu si aad ah kala hadlay xariga Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur, waxaana uu sheegay in wadahadalkaasi meel wanaagsan uu marayo.
Wuxuu sheegay in Mukhtaar Roobow lasoo deyn doono marka uu dhamaado wadahadalka islamarkaana la isku fahmo waxyaabaha ay ka wada hadlayaan, isaga iyo masuuliyiinta dowladda Soomaaliya.
Mukhtaar Roobow ayaa Baydhabo laga soo xiray 13 December maalmo un ka hor inta aysan doorashada ka dhacin magaalada Baydhabo.